Biyo bax xilli hore ah iyo mid raaga - Galmada.net
Biyo bax xilli hore ah
Biyo bax xilli hore ah ugu horeyn waa aragti shakhsiyadeed oo ah in qofku aanu maamuli karin biyo bixiisa ilaa heerka la doonayo. In la haysto aragti biyo bax xilli hore ah way ku dhici kartaa dadka oo dhan oo mararka qaarkood wax adag ayay ku ahaan kartaa ninka gaar ahaantiisa, lamaanaha ninka ama labadaba. Arrintan waxanu u aragnaa in biyo baxa xilli hore ahi badanaaba ay salka ku hasyo cilmi-nafsi.
Biyo bax aan iman ama raaga waxa kale oo uu ka iman karaa cafimaad ahaan sida tusaale ahaan xanuunka macaanka, dhaawac laf dhabarta ah ama cudurada qanjirka ragga. Waxa uu ahaan karaa saamayn ka timi in qofku cuno nooc gaar ah oo dawo, tusaale ahaan dawada la liidasho quluub ama murugo. Sida xaasaasi looga yahay guska way kala duwantahay oo ragga qaarkood waxay u arkaan inaanay helin dareen geli ku filan si ay u helaan biyo bax. Marka la samaynayo galmo waxa fiican in la debacsanaado oo la sii daayo waxyaabaha kale ee maskaxda lagu hayo.
AKHRISO: Xeerka Siyaasadda Qaran ee Jinsiga ee qeylo dhaanta culus kasoo saareen Culimada